ချစ်သူအောင်ရဲလင်း ကားမောင်းနေတုန်း နံဘေးကနေ အရမ်းချစ်နေပါပြီလို့ဆိုကာ ချဲွနွဲ့နေတဲ့ အောင်ရဲလင်း ရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေး – XB Media & News
ချစ်သူအောင်ရဲလင်း ကားမောင်းနေတုန်း နံဘေးကနေ အရမ်းချစ်နေပါပြီလို့ဆိုကာ ချဲွနွဲ့နေတဲ့ အောင်ရဲလင်းရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေး..
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…အနုပညာလောကမှာ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်လို့တင်စားခံခဲ့ရပြီး ရုပ်ရေအရပ်အမောင်းပြောစရာမရှိအောင်ချော မောလွန်းတဲ့ မင်းသားချောအောင်ရဲလင်းဟာဆိုရင် မိန်းကလေးပရိတ်သတ်တွေရဲ့အသည်းစွဲမင်းသားချောတစ်ယောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမှာဆိုရင်လည်း အောင်ရဲလင်းကပြည်သူလူထုနဲ့အတူရပ်တည်ခြ င်းမရှိ ခဲ့တဲ့ အတွက် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလည်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်နော်။တော်လှန်ရေးကာလမှာ ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတဲ့ အောင်ရဲ လင်းက ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့လျှောက်လည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ချစ်သူကောင်မလေး မေသဇင်အောင်ကတော့ အောင်ရဲလင်းနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာလျှောက်လည်နေတဲ့ပုံလေးတွေကို “ကိုကိုနဲ့အမှတ်တရ ပုံလေးတွေတင်ပါရစေ”ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူမတို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြသလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.
။သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ရင်; အောင်ရဲလင်းကိုချစ်သူကောင်မလေးက အရမ်းကိုချစ်တာပဲလို့ထင်မိပါတယ်နော်။ ဖတ် ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ခ်စ္သူေအာင္ရဲလင္း ကားေမာင္းေနတုန္း နံေဘးကေန အရမ္းခ်စ္ေနပါၿပီလို႔ဆိုကာ ခ်ဲြႏြဲ႕ေနတဲ့ ေအာင္ရဲလင္းရဲ႕ ခ်စ္သူေကာင္မေလး..
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ…အႏုပညာေလာကမွာ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ႏွင္းဆီခိုင္လို႔တင္စားခံခဲ့ရၿပီး ႐ုပ္ေရအရပ္အေမာ င္းေျပာ စရာမရွိေအာင္ေခ်ာ ေမာလြန္းတဲ့ မင္းသားေခ်ာေအာင္ရဲလင္းဟာဆိုရင္ မိန္းကေလးပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕အသည္း စြဲ မင္းသားေခ်ာတစ္ေယာက္ ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
အခုလက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြမွာဆိုရင္လည္း ေအာင္ရဲလင္းကျပည္သူလူထုနဲ႔အတူရပ္တ ည္ျခ င္းမရွိ ခဲ့တဲ့ အတြက္ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ေဝဖန္မႈကိုလည္းခံခဲ့ရပါေသးတယ္ေနာ္။ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ ၿငိမ္ခ်က္ သားေကာင္းေနတဲ့ ေအာင္ရဲ လင္းက ဒီကေန႔မွာဆိုရင္ေတာ့ ခ်စ္သူေကာင္မေလးနဲ႔ေလွ်ာက္လည္ေနတာပဲျဖစ္ ပါတယ္ေနာ္။
ခ်စ္သူေကာင္မေလး ေမသဇင္ေအာင္ကေတာ့ ေအာင္ရဲလင္းနဲ႔အတူေပ်ာ္႐ႊင္စြာေလွ်ာက္လည္ေနတဲ့ပုံေလးေတြကို “ကိုကိုနဲ႔အမွတ္တရ ပုံေလးေတြတင္ပါရေစ”ဆိုတဲ့စာသားေလးနဲ႔အတူ သူမတို႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရဲ႕ပုံရိပ္ေတြကိုျပသလာခဲ့ တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.
။သူတို႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရဲ႕ပုံရိပ္ေလးေတြကိုၾကည့္ရင္; ေအာင္ရဲလင္းကိုခ်စ္သူေကာင္မေလးက အရမ္းကိုခ်စ္တာပဲလို႔ထင္မိပါတ ယ္ေနာ္။ ဖတ္ ရႈေပးတဲ့ပရိတ္သတ္ႀကီးကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။
ဝိုင်းစုလေးကို ဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်လေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချစ်နေ ဆဲပဲ ဆိုတဲ့ အောင်လ